Global Voices teny Malagasy » Mpampianatra Ambony Tiorka Notazonin’i Malezia Fa “Nampianatra Fivavahana Tsy Naka Alalana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Oktobra 2017 5:09 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Pikantsary tamin'ny lahatsary nisy ny tafatafa nifanaovana tamin'ny mpanao gazety Tiorka Mustafa Akyol talohan'ny nandaozany an'i Malezia. Sary: lahatsary YouTube an'ny Free Malaysia Today
Notazonin'ny Departemantan'ny Raharaha Islamika ao amin'ny Faritra Federaly ao Malezia nandritra ny 18 ora ilay mpanao gazety Tiorka sady mpampianatra ambony Mustafa Akyol , noho izy voalaza fa nampianatra fivavahana tsy nahazo alalana avy amin'ny governemanta.
Mpanao gazety malaza sady mpampianatra ambony i Akyol ary nanoratra boky marobe momba ny finoana Silamo. Tonga tany Malezia i Akyol ny 22 septambra 2017 mba hanome andiana fampianarana  momba ny finoana silamo, ny demaokrasia ary ny zon'olombelona izay nokarakarain'ny Mandan'ny Fahaterahana Islamika Indray.
Taorian'ny fampianarany voalohany, nanatona azy ny mpiasan'ny JAWI ary nampitandrina azy fa nanitsakitsaka ny lalànan'i Malezia tamin'ny fampianaran'ny fivavahana tsy nahazoana alalana avy amin'ny manampahefana izy. Mba hisorohana ny olana ara-pitsarana hafa, nofoanan'ireo mpikarakara ny fampianarana faharoa tokony nataon'i Akyol sy ny hetsika hafa fanaovan-tsonia amin'ny boky.
Na dia teo aza ny fanandramana handao ny firenena, nosakanan'ny manampahefana misahana ny fifindra-monina tao amin'ny seranam-piaramanidina Kuala Lumpur i Akyol ary nalefa tany amin'ny biraon'ny JAWI mba atao fanadihadiana. Niala tsiny tamin'ireo manampahefana ao amin'ny JAWI i Akyol, nilaza fa tsy nahafantatra ny lalàna izay voalaza fa nohitsakitsahany.
Nandritra ny antsafa  taorian'ny famotsorana azy. Nilaza i Akyol fa tsy mbola nilaza mihitsy izy fa mpitoriteny Islamika ary nomena tao anatin'ny sehatra akademika ny fampianarana nataony:
Tsy nieritreritra aho fa nampianatra fivavahana ny zavatra nataoko satria tsy niteny tahaka ny imam na mufti aho ary tsy niteny tamin'ny fikambanam-pivavahana. Niresaka tamin'ny fihaonambe akademika aho ary niresaka fomba fijery samihafa momba ny fihemoram-pinoana amin'ny maha olona nanao fikarohana momba ity lohahevitra ity teo amin'ny tontolo Miozolomana.
Nofariparitany ho polisin'ny fivavahana ao Malezia ihany koa ny JAWI:
Raha tokony ho polisy ara-pivavahana, tokony hanana vaomieram-pivavahana manome torohevitra sy torolalana ianareo. Raha mampiasa hery ianareo hahatonga ny olona ho mpivavaka bebe kokoa na mampahafantatra azy ireo ny fivavahana araka ny fomba ahazoanao azy, dia mitondra loza bebe kokoa fa tsy hahasoa ilay fivavahana.
Tamin'ny lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny New York Times, nandinika momba ny fihazonana azy tany Malezia i Akyol:
Amin'ny alalan'ny fanarahamaso ny fivavahana, tsy tena miaro azy ny manampahefana. Vao mainka mampidi-doza ny fiarahamoniny izy ireo, mahabe mpihatsaravelatsihy ary mahatonga ny olona maro ho very finoana na very fanajana ny Islamo.
Nilaza i Akyol fa nanampy tamin'ny fiarovana ny famotsorana azy ny manampahefana Tiorka. Nandefa ity sioka ity izy talohan'ny nandaozany an'i Malezia:
Goodbye #Malaysia … ✈️
Veloma #Malaysia …
Mbola tiako foana ianao sy ny vahoakanao tsara fanahy, mahafinaritra sy sariaka.
Manantena fotsiny aho fa hihevitra hanana fahalalahana kokoa ianareo.
Notsikerain'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona ny fitazonana an'i Akyol, ka naneho ny fanairany mikasika ny fiakaran'ny tsy fifandeferana ao amin'ny firenena sy ny herin'ny mpitondra ambony mahery fihetsika Islamika ao amin'ny governemanta izy ireo. Manana mponina Miozolmana maro an'isa i Malezia ary milaza ny governemantany fa mampiroborobo ny fomba fijery voalanjalanja momba ny finoana silamo.
SUHAKAM, Vaomieran'ny zon'olombelona ao Malezia, namaritra ny fitazonana an'i Akyol ho toy ny ‘fandotoana”  ny lazan'i Malezia amin'ny maha-firenena mahalanjalanja azy:
Mamoritra, tsy demaokratika ary natao hampatahotra ny fihetsika tafahoatra tahaka izao ao amin'i Malezia maro fivavahana, maro foko sy mahalanjalanja amin'ny fomba fijerintsika. Tsy misy resaka fa tsy maintsy hajanon'ny Governemanta izany ary ny hetsika tahaka izany izay maneho fankahalana, hateren-tsaina sy tsy fandeferana amin'ny resaka sivily, manam-pahaizana sy ara-pivavahana dia tsy tokony ho averina intsony.
G25, vondron'ireo manampahefam-panjakana ambony sy masoivoho taloha, namoaka fanambarana maneho hatezerana  manoloana ny ‘fampijaliana’ an'i Akyol:
… nisafidy hisambotra ity mpiaro ny Silamo malaza, milamina, tony fihetsika sy demaokratika malaza ity ireo manampahefanan'ny JAWI diso taridalana sy mazoto tafahoatra ary nitazona azy nandritra ny 18 ora tsy misy torimaso sahaza, izay mitovy amin'ny herisetra lehibe, na koa fampijaliana mihitsy aza.
Nanameloka ny fanapahan-kevitry ny JAWI ho fanafihana  ny demaokrasia sy ny fahalalahana miteny i Eric Paulsen avy ao amin'ny Mpisolovavan'ny Fahalalahana:
Ity no fanafihana lehibe indrindra amin'ny demaokrasia sy ny fahalalaham-pitenenana, satria na dia ireo manam-pahaizana vahiny manana tombontsoa ara-piarovana aza mbola iharan'ny fanenjehan'ny manampahefana ihany.
Tokony hampahatsiahivina ny governemanta fa ny tsy fitovian-kevitra, ny fanakianana ary ny fanamelohana dia ampahany sy sombiny amin'ny demaokrasia ary tsy afaka misambotra izay tsy mitovy hevitra aminy izy ireo. Tsy heloka bevava ny fananana hevitra manokana sy ny fitenenana ho ren'ny rehetra.
Nampitandrina  ny Gabungan Bertindak Malaysia, firaisan'ny fikambanana tsy miankina fa mety hanohintohina ny fahalalahana akademika ny fisamborana an'i Akyol:
Mila mangataka alalana avy amin'ny manampahefana ara-pivavahana ao amin'ny fanjakana ve ireo oniversite sy ivon-toeram-pikarohana ankehitriny alohan'ny hamelàna mpandahateny Miozolomana hiresaka lohahevitra mifandray amin'ny fivavahana?
Afaka i Akyol amin'izao fotoana izao, saingy tsy afaka miresaka fivavahana sy fampitahana fivavahana na dia eo anivon'ny oniversite aza ireo mpampianatra ambony sy manam-pahaizana Miozolomana Maleziana.
Jereo ny lahatsary  misy ny antsafan'i Akyol avy amin'ny Free Malaysia Today alohoan'ny nialany tao Malezia:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/23/107954/
 Mustafa Akyol: https://twitter.com/AkyolMustafa
 nandinika : https://www.nytimes.com/2017/09/28/opinion/mustafa-akyol-detention-malaysia.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fopinion&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront&_r=0
 September 26, 2017: https://twitter.com/AkyolinEnglish/status/912703139161112576?ref_src=twsrc%5Etfw